ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: August 2010
Pakistan's tallest and shortest people
ပါကစ္စတန်က အပုဆုံးနဲ့ အရှည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ...
သူ့ အရပ်ကတော့၃ ပေနဲ့ ၃ လက်မထက်မပိုပါဘူး...ဒါပေမယ့် သူ့ ဇနီး အလီဇာမန်အတွက်ကတော့ သူ
အဆိုပါ ပါကစ္စတန်အမျိူးသားဟာ ပုံမှန်အရပ်အမောင်းရှိတဲ့ အမျိူးသမီးတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ခဲ့ ပြီး ဇနီးဖြစ်
သူကလည်း မယားကောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လေးစားမြတ်နိုးပါတယ်...
" မင်းက ကိုယ့် ကိုဘာတွေများသဘောကျတာပါလိမ့် လို့ မေးတော့ ကျွန်မအတွက်တော့ အရာရာအားလုံး
ဟာ နှစ်သက်စရာတွေချည်းပါပဲလို့ ၎င်းရဲ့ ဇနီးက ပြောခဲ့ တယ်လို "့ အလီက ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ပြန်လည်
အခုလို အရပ်အမောင်းချင်းမညီမျှပေမယ့် သူတို့ မှာ သမီးလေးသုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့ ပါတယ်...
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ အရပ်အပုဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိူးသားဟာ သူ့ မိတ်ဆွေ၊ တစ်
နိုင်ငံတည်းသားတွေဖြစ်တဲ့ အရပ် ၈ပေ ရှိ ဟက်န၀ါ့ ဇ် နဲ့ အရပ် ၇ ပေခွဲ ရှိတဲ့ ဇိုင်နက်ဘီဘီ တို့ နှင့် ယှဉ်
လိုက်ယင်တော့ တစ်ကယ့် ကိုသေးသေးလေးပါပဲ...
Meet the tallest and shortest in Pakistan (second from left) Zainab Bibi, (third from left) Haq Nawaz and Ali Zaman (third from left). Looking on are their Pakistani associates.
ပါကစ္စန်က လူပုလေးနဲ့မိုးထိ လူသားများ...
၎င်းတို့ အထူးအဆန်းအရှည်ဆုံးနဲ့ အပုဆုံး သုံးယောက်ဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးတမ်း
များ သိရှိပြန့် ပွားစေရန်ကြေငြာလှုံ့ ဆော်တဲ့ အနေနဲ့ ခရီးထွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်...
သူတို့ ယခုလို လှည့်လည်ကြေငြာလှုံ့ ဆော်နေခဲ့ တာ ၁၄ နှစ်ရှိခဲ့ ပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၃ နိုင်ငံကိုသွား
လွန်ခဲ့ တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ က မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ တဲ့ သူတို့ ဟာ ပီနန်းမြို့ နဲ့ ကေဒါး မြို့ 
တွေကိုသွားရောက်ခဲ့ ကြပြီး လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ မှာ စင်္ကာပူနှင့် သီရိလင်္ကာ ကိုထွက်ခွါ
သူတို့ ရဲ့ မိုးထိုးနေတဲ့ အ၇ပ်ကြီးတွေကြောင့် ဟက် နဲ့ ဇိုင်နက်ဘ် တို့ ဟာ သူတို့ ရဲ့ နေ့ စဉ်ဘ၀တွေမှာ အ
အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ကြရပါတယ်...
" ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဟာ လိုင်းကားစီးတဲ့ အခါမှာ ကားပေါ်တက်ရတာအလွန်ဒုက္ခရောက်ရပါ
တယ်... တစ်ခါတစ်လေ အ၀တ်အစားတွေကိုလျှော်ဆိုင်ပို့ ယင်လည်း အများတစ်ကာထက် ကျွန်တော်တို့ 
ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေက အရွယ်အစားပိုကြီးတာကြောင့် နှစ်ဆမျှ လျှော်ခပေး၇တတ်ပါတယ်...
လူကောင်တွေကကြီးတာမို့ သူများထက်လည်းအစားအသောက်က ပိုစားနိုင်ပါတယ်..." လို့ ဟက် ကရှင်း
ဇိုင်နက်ခမျာမှာလည်း အိမ်မှာအိပ်ယင်တော့၇ ပေရှည်တဲ့ သူ့ အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ
အိပ်နိုင်ပေမယ့်ခရီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ သူမရဲ့ အရပ်ကြီးကြောင့် ဟိုတယ်ခန်းရဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲအိပ်
သူတို့ နေ့ စဉ်ဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေ၊ အဆင်မပြေမှု တွေတွေ့ ရပေမယ့်သူတို့ သုံးယောက်ကတော့ အ
များနဲ့ မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ သူတို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားတွေကို အကောင်းဘက်ကနေပဲရှုမြင်ထားကြ
" ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကိုပဲသွားသွား လူတွေက နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ကြိုဆိုကြပါတယ်...ဒါကြောင့် ဒီလိုအ
ခြေအနေကြောင့် တော့ စိတ်မညစ်ပါဘူး..." လို့ အလီ ကပြောကြားခဲ့ ပြီး ၎င်းတို့ အနေနဲ့ မလေးရှားဝန်ကြီး
ချူပ် ဒါတွတ်ဆရီနာဂျစ်တွန်ရာဇတ် နဲ့ တွေ့ ချင်ပြီးဖြစ်နိုင်လျှင် မူဆလင်ထုံးစံဥပုတ်ဖြေထမင်း အတူစားချင်
ပါတယ်လို့ လည်း ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ကံကောင်းသူ လူပုလေးအလီကတော့ ဖူးစာရှင်တွေ့ ပြီး အိုးအိမ်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ ပေမယ့်လူရှည်ကြီးများဖြစ်
တဲ့ ဟက်နဲ့ ဇိုင်နက် တို့ ကတော့ ကြင်ဖက်ဇနီး၊ ခင်ပွန်းတွေကို ရှာဖွေနေဆဲပါပဲ...
" ကျွန်တော်ကတော့ အနည်းဆုံး အရပ်ခြောက်ပေခွဲလောက်ရှိပြီး၊ ချောမောလှပ၊ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိူးသ
မီးတစ်ဦးနဲ့ ဖူးစာဆုံချင်ပါတယ်..." လို့ ဟက် ကအပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်ပြီး ဇိုင်နက်ကတော့ သာမန်ခင်ပွန်း
လောင်း ဆိုယင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဒီသတင်းနဲ့ တစ်ဆက်တည်းပဲ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အသက် ၁၄ နှစ်နဲ့အရပ် ၆ပေ ၉လက်မနဲ့ ကမ္ဘာ့ အရပ်အ
ဆုံးဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးအကြောင်းလေးလည်းဓါတ်ပုံနဲ့ တစ်ကွတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...သူလေးကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ မှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ ပြီး အရပ်ရှည်လွန်းလို့ 
ကျောင်းလည်းမသွားတော့ ပဲ အလုပ်လည်းရှာဖို့ ခက်နေရှာပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ဘီလမ်မြို့ မှာလုပ်မယ့်မော်ဒယ်ရှိုးပြပွဲတစ်ခုမှာတော့ သတို့ သမီးဝတ်စုံနဲ့ သရုပ်ပြလမ်းလျှောက်
He stands at no more than 39 inches, but to his wife, Ali Zaman is the world.
The Pakistani marriedawoman of average height and the latter adores her husband just the way every wife does.
“I asked her what she likes about me and she said, ‘I like everything that is you’,” recalled Ali fondly.
Through the union, he is blessed with three lovely daughters.
The 48-year-old, who is the shortest man in Pakistan, looked especially tiny standing between his pals, Haq Nawaz and Zainab Bibi, who stand at 245cm and 230cm respectively.
The trio are currently onatour to showcase their unique height and introduce Pakistani culture.
They have been doing this for the past 14 years and have set foot in more than 23 countries.
Arriving in Malaysia on Aug 10, they have been to Penang and Kedah so far and will depart to Singapore and Sri Lanka on Sept 11.
With their towering height, Haq and Zainab face certain challenges in their daily lives.
“For instance, it’s pretty hard for us to get intoapublic vehicle. Sometimes we are charged extra for dobi services simply because the sizes of our clothes are bigger. In addition, our food intake is also higher than normal people,” explained Haq.
While Zainab sleeps onaspecially-built seven-feet-long bed at home, when she is traveling, sometimes she has to sleep on the floor in hotel rooms due to her enormous size.
Despite the inconveniences they face, the trio view their extraordinary height and size asablessing rather thanadisadvantage.
“Wherever we go, people welcome us with open arms. So we are not complaining,” said Ali, as he went on to express their wish of meeting our Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and if possible, break fast with him.
While Ali has happily settled down, Haq and Zainab are looking for their soul mates.
“I would like to meet someone that is tall – at least six feet half – and attractive,” said Haz withasmile, while Zainab said she would be happy to be with “a normal guy”.
Labels: news: AP: youtube
Farmer: Fighter jets killed my chickens
စစ်တိုက်လေယာဉ်ကြောင့် ကြက်များလန့် ပြီးသေဆုံးသည့် အတွက်လျော်ကြေးတောင်း...
ကြောက်ရပါသည်... သဘောက်မ ဘာမထီ...
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ မွေးမြူရေးခြံသမားတစ်ဦးဟာ ၎င်းရဲ့ ခြံပေါ်ကနေ စစ်တိုက်လေယာဉ် ၂ စီးနိမ့် နိမ့် လေးနီး
ကပ်စွာပျံသန်းသွားခဲ့ တာကြောင့် မွေးမြူထားတဲ့ ကြက် အကောင် ၅၀၀၀ လောက်သေဆုံးသွားခဲ့ ရတာမို့ 
နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို တရားစွဲဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဘရစ်တနီနယ်၊ ပလီဂူအင်း ရွာကလေးက အီတီယန်းလီမာဟုတ် က အဆိုပါဂျက်တိုက်လေယာဉ်အသံတွေ
ကြောင့် ကြက်ခြံအတွင်းကြက်များထိတ်လန့် တကြားရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ကာ အကောင်ပေါင်း ၄၈၀၀၀ ကျော်
အသက်ရှူကြပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
လွန်ခဲ့ တဲ့ အင်္ဂါနေ့ က နေ့ လည်စားစားနေချိန်မှာ အဆိုပါစစ်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီး မွေးမြူရေးခြံပေါ်ကနေ
လေယာဉ်တွေ ခေါင်းပေါ်ကနေကျော်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထဲမှာ နေ့ လည်စာစားနေကြပါတယ်...
လေယာဉ်အရှိကြောင့် တုန်ခါသွားတာတောင် ခံစားသိရှိလိုက်ကြရပါတယ်...လို့ ၎င်းကဆိုခဲ့ ပါတယ်..
သူဟာချက်ချင်းပဲ ကြက်တွေထားတဲ့ အဆောက်အဦးဆီကိုပြေးသွားခဲ့ တော့ ကြက်တွေဟာ အဆောက်အ
အဦးရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းဆီကိုပဲစုံပြိုတိုးဝှေ့ နေခဲ့ ပြီး ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ကြက်တွေဟာ သေဆုံးနေခဲ့ ပါတယ်...
ကြက်တွေဟာကြောက်လန့် တစ်ကြားနဲ့ တစ်ဖက်ထဲမှာပဲတစ်ကောင်ပေါ်တစ်ကောင်ထပ်ပြီးလုတက်နေ
ကြတာ ကြက်တွေထားတဲ့ အဆောင်သုံးခုစလုံးမှာပါပဲ လို့ သူကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ သာသွားမကြည့် ဖြစ်ခဲ့ ယင် ဒီထက်ကိုအခြေအနေပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်...လို့ လည်းသူက
သေဆုံးသွားတဲ့ ကြက်တွေကို စစ်ဆေးခဲ့ တဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်က ထိုကြက်တွေဟာ စစ်လေယာဉ်
မဖြတ်သန်းခင်အချိန်က အသက်မသေပဲရှိနေခဲ့ ကြပါတယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သမ၀ါယမ အသင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကြက်ပေါင်း ၆၈၀၀၀ လောက်မွေးမြူထားတဲ့ မွေးမြူရေးသမားကတော့ 
အခုအဖြစ်အပျက်အတွက် နစ်နာကြေး ယူရိုငွေ ၁၅၀၀၀ တောင်းဆိုထားပါတယ်...
ပြင်သစ်လေတပ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဖရက်ဒရစ်ဆိုလာနို ကတော့ လွန်ခဲ့ တဲ့ အင်္ဂါနေ့ ကတော့ အ
မြင့် ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များလိုက်နာရေးအစီအစဉ်အရ တိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းဟာ ထိုမွေးမြူရေး
ခြံပေါ်ကနေ ပျံသန်းခဲ့ ကြောင်း ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းတို့ အနေနဲ့ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကို စုံစမ်းလေ့ လာသွားမယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာက ကပြောဆို
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ကတော့ ဗြိတိသျှ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ စတက်ဖို့ ရှိင်းရား အရပ်က မွေးမြူရေးခြံ
ရှင်တစ်ဦးကို လေတပ်က မြှားနီ လေယဉ်များသရုပ်ပြတပ်ဖွဲ့ ကြောင့် ကြက်တွေကြောက်လန့် ကာ ဥနှုန်း
များကျခဲ့ တာကြောင့် လျှော်ကြေးနှေုါ ပေါင်စတာလင် ၄၂၀၀၀ ပေးလျော်ခဲ့ ပါတယ်...
ယော့ခ်ရှိုင်းယားနယ်က ပြိုင်မြင်းခြံပိုင်ရှင်တစ်ဦးဟာလည်း သူ့ ရဲ့ အဖိုးတန်မြင်းတစ်ကောင် ဂျက်တိုက်လေ
ယာဉ်ပျံများအသံကြောင့် ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ ပြီးထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားရာက ဒါဏ်ရာရသွားခဲ့ လို့ လျော်
ငွေ ပေါင်စတာလင် ၁၁၇၀၀၀ ရရှိခဲ့ ဖူးပါတယ်...
မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ တဲ့ မှတ်တမ်းများအရ လွန်ခဲ့ တဲ့ လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အ
သံဆူညံမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ ရတဲ့ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် လျော်ကြေးငွေပေါင်း စတာလင်ပေါင်
၇.၆ သန်း ပေးလျော်ခဲ့ တယ်လို့ ဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်...
ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ လျော်ကြေးတောင်းဖို့ နေနေသာသာ တပ်မတော်ကို စိတ်နဲ့ တောင်မပြစ်မှားနဲ့ လို့ 
သုံးဖက်ချွန်၊ စမူဆာဘွဲ့ ရ ဘဘတစ်ဦးက ၈၈ ခုနှစ်တုံးက အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ ပြောခဲ့ ပါသေး
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လည်း စိတ်နဲ့ တောင်မပြစ်မှားရဲပါဘူးခင်ဗျာ...
A French poultry farmer is suing his country’s defence ministry after claiming that two low-flying fighter jets frightened almost 5,000 of his chickens to death.
Etienne Le Mahaute, from the village of Pleguien in Brittany, claims that the military aircraft causedastampede in which 4,8000 birds suffocated.
He said he was having lunch on Tuesday when two military aircraft shot over his farm. “ We were in the house eating. When ( the planes ) passed over-head , we had vibrations in our backs,” he said.
He ran straight to the giant coops where the chickens were kept to find that they had rushed to the same side and lay lifeless in their thoundsands.
“The chickens were terrified. They were stacked up on top of each in several layers of the same side of the three buildings,” he said.
“ If we hadn’t been there, it could have been worse.”
A vet who examinedabatch of dead chickens confirmed that they were all alive before the aircraft’s fly-past. The farmer, who is in charge of 68,000 fowl belonging toaco-orperative, is demanding up to 15,000 euros in compensation. Frederic Solano ,aFrench air force official, confirmed that two jets flew past the farm on Tuesday as part ofa‘ scheduled flight at an altitude respecting rules’.
The defence ministry said it would look into the incident.
AndaYorkshire racehorse owner received £117,000 after one of his steeds injured itself while running amok to escape passing jets.
Recent documents show thatatotal of £7.6 million has been paid out in damages over the past four years because of military noise pollution.
Posted by Unknown | at 12:58 AM |2comments
The Noisiest Beach in the World
လေယာဉ်ပျံနှင့် အနီးဆုံးအပမ်းဖြေ ကမ်းခြေ
သင့် အနေနဲ့ လေဆိပ်ကနေလေယာဉ်ပျံကြီးတွေပျံတက်သွားတာ၊ လေဆိပ်ကိုဆင်းသက်လာတာတွေကို
ကမ်းခြေမှာအနားယူအပန်းဖြေယင်း အနီးကပ်ဆုံးကြည့် ချင်တယ်ဆိုယင်တော့ နယ်သာလန် လို့ ခေါ်တဲ့ 
ဟော်လန်လို့ လည်းအမည်ရကာ ဒတ်ခ်ျလို့ ပါ လူသိများတဲ့ နိုင်ငံက စိန့် မာတင်ကျွန်းက ပင်လယ်ကမ်းခြေ
ကိုသာ သွားရောက်အနားယူကြည့် ရှုနိုင်ပါတယ်...
လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းပြီး မီတာအနည်းငယ်လျှောက်လိုက်တာနဲ့ ပင်လယ်ထဲခုန်ဆင်းပြီးရေကူးကာ သင့် ရဲ့ 
လေယာဉ်အတက်အဆင်းတွေကြောင့် နည်းနည်းတော့ နားငြီးရပေလိမ့် မယ်...
မဟုတ်တရုတ်တော့ ရေထဲမှာမလုပ်ကြနဲ့ နော်...လေယာဉ်ပေါ်ကနေဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုရိုက်လို့ ရတယ်...
၀ီကီပီးဒီးယားမှာ ဖော်ပြထားချက်အရ နယ်သာလန်အန်တီးလ်စ် ကျွန်းမှာတည်ရှိတဲ့ စိန့် မာတင်ကမ်းခြေ
က မဟို အပန်းဖြေကမ်းခြေဟာ ကပ်လျှက်တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိတဲ့ ဂျူလီယာနာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
လေဆိပ်ကြောင့် ကမ္ဘာမှာ ထင်ရှားကျော်ကြား၊ လူသိများလှပါတယ်...
ပြေးလမ်းအမှတ် ၁၀ ကိုဆင်းမယ့် လေယာဉ်...
ပျံသန်းလာတဲ့ လေယာဉ်တွေဟာ အရှည် ၇၁၅၂ ပေ ( မီတာ ၂၁၈၀ ) သာရှိတဲ့ ပြေးလမ်းကိုဆင်းသက်ဖို့ 
ထိုပြေးလမ်းအမှတ် ၁၀ ရဲ့ အစကိုတတ်နိုင်သလောက်ရအောင်နီးကပ်စွာ နိမ့် ဆင်းကြရပါတယ်...
ဒါကြောင့် လေယာဉ်တွေဟာ အပမ်းဖြေကမ်းခြေရဲ့ အထက်နိမ့် နိုင်သမျှနိမ့် အောင် ဆင်းသက်ကြရတာဖြစ်
ဘိုးအင်း ၇၄၇ လိုလေယာဉ်ပျံကြီးတွေ အပါအ၀င် လေယာဉ်များအလွန်နိမ့် တဲ့ အမြင့် ကနေ ကမ်းခြေပေါ်
က ပျံသန်းဆင်းသက်၊ ပျံတက်ကြရတာမို့ ထိုနေရာလေးကတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လေယာဉ်ပျံချစ်သူများ
အတွက် နာမည်ကျော်၊ လူကြိုက်များတဲ့ နေရာဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်...
လေယာဉ်ပျံတွေဘယ်လောက်တောင်နိမ့် အောင်ပျံသလဲဆိုယင် ကမ်းခြေမှာရပ်နေသူတွေဟာ ပြေးလမ်း
အမှတ် ၁၀ ကနေပျံတက်တဲ့ ဂျက်လေယာဉ်ပျံကြီးတွေရဲ့ လေတွန်းကန်အားကြောင့် ပင်လယ်ရေပြင်ထဲကို
တောင် လွင့် ကျသွားနိုင်ပါတယ်...
ထိုလေတွန်းအားကြောင့် ပင် ရေလှိုင်းလုံးကြီးများဖြစ်ပေါ်တတ်တာကြောင့် လေလှိုင်း၊ရေလှိုင်း၊ ပင်လယ်
ပြင်စကိတ်ဘုတ် စီးသူများအတွက်လည်း စိတ်ကြိုက်နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပါသေးတယ်...
ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရကတော့ နီးကပ်စွာ ဆင်းတက်ပျံသန်းနေတဲ့ လေယာဉ်ကြီးတွေကြောင့် လူတွေကို အ
ပြင်းအထန်ဒါဏ်ရာရနိုင်၊ အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်....
တစ်ချိူ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားဧည့် သည်တွေက ပြေးလမ်း အမှတ် ၁၀ ရဲ့ ခြံစည်း
ရိုးကိုကျော်ကြီး တွဲလွဲခိုကာလေယာဉ်ပျံစက်အင်ဂျင်ရဲ့ လေတွန်းအားကြောင့် ပင်လယ်ရေထဲကိုလွင့် စင်သွား
တာကိုခံရအောင် တမင်တကာလုပ်တတ်လွန်းလို့ ယခုအခါမှာတော့ နောက်ထပ်ခြံစည်းရိုးအသစ်တစ်ခုကို
အဆိုပါ ပြေးလမ်း အမှတ် ၁၀ နောက်မှာ ထပ်မံတပ်ဆင်ထားခဲ့ ရပါတယ်...
၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ထိုနေရာကလေးဟာ လေယာဉ်ပျံများ ပျံတက်၊ပျံဆင်းလုပ်တာကို ပြေးလမ်းအဆုံးကနေ
အနီးကပ်ကြည့် ရှုနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရေအတွက်အနည်းဆုံးနေရာလေးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်..
ယခုလို သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေပေါ်ကနေ လေယာဉ်ပျံကြီးတွေကို အနီးကပ်ကြည့် ရှုရတာဟာ လူကြိုက်များ
လွန်းလို့ ကမ်းခြေရဲ့ အရက်ဘားဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များအားလုံးနီးပါးမှာ လေကြောင်းလိုင်းများရဲ့ လေ
ယာဉ်ဆိုက်ရောက်၊ ထွက်ခွာသည့် အချိန်ဇယားများ ရေးသားပြသထားကြပြီး ညခင်းဆည်းဆာ ဘားနှင့် အ
ကင် ဆိုင်ကတော့ ( တစ်မူထူးခြားပြီး ) လေယာဉ်မှူးများနှင့် လေဆိပ်ရဲ့ လေကြောင်းလမ်းညွှန်ကွပ်ကဲထိန်း
ချူပ်အခန်းတို့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာတွေကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပေးတဲ့ စပီကာများပင်တပ်
အဲဒီနေရာလေးတော့ တစ်ခေါက်လောက်ရောက်အောင်သွားကြည့် ချင်သားဗျာ...
Posted by Unknown | at 1:56 AM |2comments
Labels: news : wikipedia
ကျွန်တော့် ကိုသာ ရဲရဲကြီးမဲပေးလိုက်ပါ...
အန်တီတို့ ၊ ညီမလေးတို့ ရှေ့ ရေး သာယာဖွံ့ ဖြိုး ၊ အလှပတိုးစေရပါ့ မယ်...
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အမတ်နေရာအတွက်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှ နိုင်ငံ
ရေးသမားတစ်ဦးက ၎င်း၏ရွေးကောက်ပွဲလှုံ့ ဆော်ရေးဘဏ္ဍာငွေများ ရှာဖွေနိုင်ရေးအတွက် အမျိူးသမီးများ
၏ရင်သားများ ဖွံ့ ထွား၊ စွင့် ကားစေရန် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ပေးမည့် ဆုပါဝင်သည့် မဲလက်မှတ်များဝယ်ယူကာကံ
စမ်းမဲဖောက်ပေးမည့် ဆုမဲစနစ်တစ်ခု ပြုလုပ်ဆွဲဆောင်းစည်းရုံးခဲ့ ပါတယ်...
" တစ်ချိူ့ သူတွေက တီဗီတွေနဲ့ မဲစနစ်လုပ်သလို ပါပဲ...ကျွန်တော်တို့ ကလည်း လေဒီတွေအကြိုက်ဒီလို ဆီလီကွန်လေးတွေနဲ့ ရင်လွှာမို့ မို့ လွင်ဖြစ်စေမယ့် အစီအစဉ်လေးပြုလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်...အခု စီစဉ်
တဲ့ ဆုကတော့ အတော်လေးကို ထူးလို့ လူတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်..." လို့ အမျိူးသား
လွှတ်တော် အမတ်နေရာအတွက်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အတိုက်အခံ အမတ်လောင်း ဂူစတာဗိုရိုဂျာ့ စ် က ကာ
ရကတ် မှာပြုလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အလှပြုပြင်ဖန်တီးခွဲစိတ်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ရင်သားများ ဖွံ့ ထွားအောင်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းဟာ အလှအပကို
အလေးထားတဲ့ ၊ နိုင်ငံတကာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုရရှိသူအလှမယ်တွေမကြာခဏထွက်ပေါ်လာရာဖြစ်
တဲ့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာ ခေတ်စားလာနေပါတယ်...
ယခုဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးဆုတ်ကပ်ကြီးမှာတောင် ဗင်နီဇွဲလားကအမျိူးသမီးတွေရဲ့ အလှအပဆိုင်ရာပြုပြင်
ခွဲစိတ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကလျော့ မသွားပါဘူး...
များစွာသော အမျိူးသီးတွေဟာ ချေးငွေတွေရယူပြီး သူတို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှအတွက်ခွဲစိတ်မှုတွေ ခံယူပြု
တရားမျှတမှုသာပဓာန ဆိုတဲ့ အတိုက်အခံပါတီက မစ္စတာရိုဂျာ့ စ် ကတော့ အမျိူးသမီးဝါဒီများရဲ့ ဝေဖန်
မှုများနှင့် အခုလိုဆုမဲစနစ်ရဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေကို ၎င်း
အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" အခုပေးတဲ့ မက်လုံးက ရွေးကောက်ပွဲ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေဖို့ ပါပဲ...တစ်ခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှမပါရှိပါဘူး...
ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုလုပ်မှာက ဆရာဝန်ပါ...ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး..." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" တစ်စုံတစ်ယောက်က တီဗီတစ်လုံးကို မဲဖောက်ယင် တစ်ချိူ့ ကဒီတီဗီဟာ အမျိူးအစား၊ အရည်အသွေး
ကောင်းတယ်၊ တစ်ချိူ့ က မကောင်းဘူး စသည်ဖြင့် ထင်ကြမှာပါပဲ...ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ...ကျွန်တော်က
ဘယ်သူ့ ကိုမှ သိက္ခာကျအောင် ထိခိုက်စော်ကားနေတာမဟုတ်ပါဘူး..." လို့ သူကဆက်ပြောခဲ့ ပါတယ်...
လာမည့် လွှတ်တော်သက်တမ်းအသစ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးမှုများကိုဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင် စက်တင်
ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ တွင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်..
ပါတီရံပုံငွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးက ဆ၇ာများလည်း ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေသုံးချင်ယင်သုံး
နိုင်အောင် စေတနာရှေ့ ထားပြီး တင်ပြလိုက်ရပါတယ်...
ထိုနိုင်ငံကြီးမှာလည်း ရေအိတ်၊ သဲအိတ် တန်ခိုးနဲ့ အလှတွေတိုးနေတဲ့ မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်
ဒါကြောင့် ဒီအစီအစဉ်ဆိုယင်လည်း လူကြိုက်၊ လေဒီကြိုက်များမှာ အသေအချာပါပဲ...
A Venezuelan politician is offering breast implants asaprize inaraffle to raise funds for his parliamentary election campaign. "Some people raffle TVs and we decided to offer this. It's an interesting prize and there'salot of interest," Gustavo Rojas, an opposition candidate foraNational Assembly position, said while campaigning in Caracas.Cosmetic surgery, especially breast enlargement, is widespread in image-conscious Venezuela, whose beauty queens have won numerous international pageant titles. Evenarecession has not diminished Venezuelans' appetite for cosmetic surgery, with many people taking out loans for operations.
Rojas, of the opposition First Justice party, said he was not too worried about potential feminist criticism or the medical details of his offer. "The raffle isafinancing mechanism, nothing else. It's the doctor who will do the operation, not me," he said.
"When someone rafflesaTV, some people think it'sagood TV but others don't like it. It's the same. I'm not showing disrespect to anyone." Venezuelans vote on September 26 foranew parliament.
Posted by Unknown | at 3:25 AM |4comments
Labels: news: reaters.com
Man says he gave birth to baby girl after losing his penis
နတ်ထွင်းတဲ့ တွင်းနဲ့ ကလေးမွေးသူ...
အထူးအဆန်းတွေကိုမှ သိချင်ကြည့် ချင်ကြသည့် ထောင်နှင့် ချီသော စပ်စုသူများဟာ ဂါနာနိုင်ငံအနောက်
ပိုင်း ဆက်ဖ်ဝီအဘိုဒူအမ် ရွာကလေးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် ယောကျာင်္းစင်စစ်ကနေ
အလိုလိုလိင်ပြောင်းပြီးကလေးမွေးခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ နာမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်ပွဲ ကိုလာရောက်ခဲ့ ကြပါ
ကွာဘီနာဘီနီး လို့ ခေါ်တဲ့ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ အောက်လမ်းဆရာနတ်ကတော် ကသူဟာ တစ်မူထူး
စွာ ကိုးလကြာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ ရပြီး အဘီနာအပိုမာဆူး လို့ အမည်ပေးလိုက်တဲ့ ကလေးငယ်လေးကို သူ့ 
ရဲ့ ဝမ်းနဲ့ လွယ်ပြီးလွန်ခဲ့ တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ မှာသူ့ မွေးလမ်းကြောင်းကနေ ပဲအမှန်အကန်မွေးခဲ့ တာ
ဖြစ်ပါတယ်လို့ ကလေးငယ်ရဲ့ ကင်ပွန်းတပ်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကလေးမွေးစဉ်တုံးက အတူရှိနေခဲ့ တဲ့ သားဖွားလက်သည်ကြီးကလည်း သူ့ ရဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ အမှန်ပဲဖြစ်
တယ်လို့ ထောက်ခံ အတည်ပြုပေးခဲ့ ပါတယ်...
အမျိူးသမီးတစ်က်ရဲ့ ဝတ်စုံ၊ ဆံပင်တုတွေနဲ့ အမျိူးသမီးတွေရဲ့ အပြင်အဆင်မျိူးစုံဆင်မြန်းထားပြီး ယခုအခါ
အဘီနာ ဘီနီး ဆိုတဲ့ အမည် သို့ ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဘီနီးက သူ့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တုံးမှာ အပိုမာ
ဆူးလို့ အမည်ရှိတဲ့ မြစ်စောင့် နတ်တစ်ပါးသူ့ ကိုပူးကပ်ပြီး နတ်ဆရာ၊နတ်ကတော်အဖြစ်ရောက်စေခဲ့ တယ်
လို့ တစ်ကယ့် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အသံနဲ့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
နတ်ကသူနဲ့ ပဲချစ်ရမယ်လို့ ဆိုတာ မလိုက်နာမိလို့ ...
အခုတော့ ဘ၀ပြောင်းခဲ့ ရပြီပေါ့....
သူဟာ နတ်နဲ့ လက်ထပ်ထားတာမို့ ထိုနတ်ကပဲ သူ့ ကိုအမျိူးသမီးတွေနဲ့ မချစ်ရဘူး ပြောခဲ့ တယ်လို့ သူက
ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ သူငယ်စဉ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က နတ်ပြောခဲ့ 
တဲ့ သတိပေးစကားကို မလိုက်နာပဲသူဟာ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီး ချစ်ရည်လူးကာ နှစ်ကိုယ်
အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူ့ ကိုနတ်ကိုင်ခဲ့ ပါတော့ တယ်...သူ့ ရဲ့ ရွှေပန်းညိုဟာ မကြာခဏ နာကျင်ကိုက်ခဲလာခဲ့ 
တစ်ညမှာတော့ သူ့ ရဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနာကျင်ကိုက်ခဲ ခဲ့ ရပြီးနောက် သူ့ မျက်စေ့ နဲ့ 
မယုံနိုင်လောက်စရာပဲ သူ့ ရဲ့ ရွှေပန်းပျောက်ကာ နတ်ထွင်းတဲ့ တွင်းတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ ပါတော့ တယ်...
" ( အဲဒီတုံးက ) နာကျင်ကိုက်ခဲနေစဉ်မှာ ကျွန်တော် အဲလေ...ကျွန်မဟာ ယောင်ယမ်းပြီး မွေးရာပါပစ္စည်း
ကို လက်နဲ့ ကိုင်မိပါတယ်...အဲဒီအခါမှာပဲ ကျွန်မဘ၀ပြောင်းပြီး ကမ္ဘာပြားခဲ့ ရပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတော့ 
တယ်..." လို့ သူမ ( အခုတော့ သူမဖြစ်သွားပြီပေါ့ ...) ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ ရင်သားတွေကတော့ မဖွံ့ ဖြိုးလာခဲ့ ပါဘူး လို့ သူမက ဆိုခဲ့ ပါတယ်...အခုလိုမိန်းမဘ၀ကိုပြောင်းလဲခဲ့ 
ရပြီးနောက်မှာတော့ သူမဟာနေသားတစ်ကျဖြစ်ခဲ့ ပြီ့း အခုကလေးရဲ့ အဖေဖြစ်တဲ့ ကွီဆီငကိုအာ ဆိုတဲ့ 
ငနဲတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ သံယောဇဉ်ဖြစ်ကာ လွန်လွန်ကျူးကျူးချစ်ရည်လူးခဲ့ လို့ အခုကလေးကိုမွေးခဲ့ 
ထိုသို့ နှစ်ကိုယ်တူကြည်ဖြူပြီးကာမှ ပတ္တမြားရွှေကြုတ်နှုတ်ငုံတယ်လည်းဆိုရော အဆိုပါ ကောလိပ်ကျောင်း
သားဟာ ယောကျာင်္းတို့ လုံ့ လနဲ့ အလျှင်အမြန်ပဲ စွန့် ခွာသွားခဲ့ ပါတော့ တယ်...
ယခုလို အသက် ၂၀ ကျော် အရွယ်ရှိအမျိူးသားတစ်ဦးက မိန်းမအသွင်အဖြစ်ပြောင်းကာ ကလေးမွေးခဲ့ တာ
ဟာ အံ့ သြဘနန်း အလွန်းထူးဆန်းပြီး ဘီနီးကလည်း အားလုံးဟာအမှန်တွေပဲဖြစ်ကာ သူ့ အနေနဲ့ မဟုတ်
ပဲနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ အခိုင်အမာဆိုခဲ့ ပါတယ်...
သံသယရှိသူ မည်သူမဆို သူ့ နဲ့ ကလေး ရှိရာ ရွာကလေးကိုလာရောက်လေ့ လာကြည့် ရှုစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်
လို့ လည်း ဘီနီး ကဆိုပါတယ်...
" လာယင်တော့များရဲ့ ကလေး အဘီနာ လေးတွက် လက်ဆောင်ပါအောင်ယူလာခဲ့ နော်..." လို့ သူက အဲ
လေ...သူမက ထပ်ပြောခဲ့ ပါတယ်...
မနေ့ က လိင်အင်္ဂါပဲပြောင်းတဲ့ သတင်းတင်ပြီး...
ဒီနေ့ လည်းကျရောပြောင်းရုံတင်မကပဲ ကလေးပါမွေးတယ်ဆိုတော့ ...
ကမ္ဘာတင်မက စင်္ကြာဝဠာ ကြီးပါပြားသွားပြီထင်ပါတယ်...
( အင်္ဂလိပ်လိုသတင်းထဲမှာ ထိုသူရဲ့ အသက်ကို ၂၄ လို့ ဆိုထားပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့ အသက် ၁၃ နှစ်မှာ နတ်ဝင်ပူးခဲ့ ပြီး ထိုမှ
နောက် အနှစ် ၂၀ အကြာမှာ မှာနတ်အလိုကိုဆန့် ကျင်ပြီး မိန်းမယူခဲ့ တယ်ဆိုလို့ အသက်ကို ၃၄ လို့ ယုတ္တိရှိအောင်ပြင်ထားပေး
Hundreds of curious spectators gathered atanaming ceremony in the western Ghanaian village of Sefwi Aboduam recently to see the miracle child–born through what some believe is the world’s first genetic-male pregnancy.
Kwabena Benie,a34-year-old senior fetish priest, said he had an “unusual” nine months of pregnancy and deliveredachild, named Abena Apomasu, through his “vagina” at home on August 10, he said the ceremony. A midwife who was present during the birth confirmed his claims.
Dressed inawoman’s gown, wig and “accessories to match,” and speaking ina“feminine voice,” Benie – who now goes by the name Abena Benie told how at 13 years old,ariver god named Apomasu possessed him and led him to becomeapriest. He said the god told him not to have sex with women because he was spiritually married to the god. But 20 years later, he marriedawoman and had intercourse, despite the warning he received asateen. Frequent pains in his penis soon followed, he said.
And after he experienced sharp pain in his waist one night, he couldn’t believe his eyes when he saw his penis was missing–andavagina was in its place. He said: “When I felt the pain, I tried to touch my penis with my hands but I realized that it had turned intoavagina.” Female breasts never developed, he added. Having come to terms with his new gender, he beganasexual relationship withaman, named Kwesi Nkoah, who he said is the father of his child. But the college student quickly abandoned Benie when he learned about the pregnancy, he said.
As outlandish as the claims may be thataman in his 20’s transformed intoawoman and gave birth toababy, Benie insists “every bit of it was true because he would not tell the whole world that he had given birth toachild when he had not done so.” Benie encourages any skeptics to visit him and his baby girl in their village. “They should come along with gifts for little Abena,” he added.
Posted by Unknown | at 1:40 AM |3comments
Man claims he has developed female genitals
စိတ်သောကကြီးစွာရောက်နေရတဲ့ မာလာဝီနိုင်ငံမှ အမျိူးသားတစ်ဦးက ၎င်းရဲ့ ညီပု၊ ရွှေဥကလေးတွေဟာ
တစ်ဖြည်းဖြည်း သေးငယ်ပျောက်ကွယ်နေပြီး မိန်းကလေးတို့ သဘာဝထာဝရတစ်ခုဖြစ်တည်နေလာပါတယ်
လို့ အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဂျလီမာတီယူး က ၎င်းရဲ့ နောက်ပေါက်နေရာကနေ အဆိုပါ ပန်းကလေးပွင့် လန်း
လာခဲ့ တာအမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူကလည်း ထပ်လောင်းထောက်ခံအတည်ပြုအားပေးခဲ့ တယ်လို့ ဆို
" လွန်ခဲ့ တဲ့၂ နှစ်လောက်က ကျွန်တော့် ရဲ့ နောက်ဖေးပေါက် ( မစင်စွန့် သည့် ဒွါရပေါက် ) မှာ အသားပို
လေးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ တော့ ဇနီးဖြစ်သူက အဲဒါဟာ သူတို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့ အတည်
ပြုပြောဆိုခဲ့ ပြီး နောက်တာ့ ထိုဟာလည်းပျောက်သွားခဲ့ ပါတယ်..." လို့ မာတီယူ ကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
" ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ဇွန်လမှာ တော့ အဲဒါလေးက အရှေ့ နဲ့ အနောက်ဒွါရအပေါက်တွေကြားက နေရာလေး
မှာပြန်ရောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ်...ကျွန်တော့် ရဲ့ ဖွားဖက်လေးလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းသေးငယ်သွားပြီး
နောက်တော့ ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်သွားခဲ့ တာပါပဲ...အခုတော့ တစ်ပွင့် တည်းသောပန်းသာကျန်ခဲ့ ရ
ပါပြီ..." လို့ မာတီယူ ကထပ်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သူဟာချက်ချင်းပဲ တိုင်းရင်းဆေးဆရာဆီသွားပြီး ကူညီကယ်တင်ဖို့ ပန်ကြားခဲ့ လို့ ဆရာက အမျိူးသမီးအင်္ဂါ
လေးကိုဓါးနှင့်ဖြတ်ပြီး ဆေးရွက်တွေအရည်ညှစ်ပေးခဲ့ ပါတယ်...
" ဆေးဆရာက အခြေပြုနေတဲ့ ငွေခရုလေးကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဆေးရွက်တွေကြိတ်အုံခဲ့ ပါတယ်...အခုအ
ခါမှာတော့ ပျောက်ဆုံးခဲ့ တဲ့ ညီငယ်လည်းပြန်ပေါ်လာပါတယ်...ဒါပေမယ့် သေးငယ်ကြုံလှီလို့ မိန်းမဖြစ်သူ
နှင့်ယောကျာင်္းပီပီစံချိန်မမှီ၊ ခွန်အားမပြနိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်..." လို့ မာတီယူ ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ယခုကဲ့သို့ ဖုံးကညာတစ်ပါး၊ လုံးရာကပြားသွားရခြင်းဟာ ၎င်းရဲ့ ယခင်ယောက္ခမဟောင်းနှင့် ဒုတိယဇနီးဖြစ်
သူရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းတို့ စုန်းကဝေအတတ်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကြံကြတာလို့ သူက စွပ်စွဲခဲ့ ပါတယ်...
မာတီယူတစ်ယောက် တစ်ခြားလူတစ်ဦးရဲ့ ဇနီးမယားကို ခိုးယူပေါင်းသင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ပထမဇနီး
ဖြစ်သူဟာ သူ့ ဆီမှထွက်ပြေးသွားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ထိုဇနီးရဲ့ မိခင်နှင့် ဒုတိယမယားရဲ့ ခင်ပွန်းတို့ ပေါင်းပြီး စုန်း
အောက်လမ်းပညာသုံးပြီး သူ့ ကိုမကောင်းကြံတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ယခုအခါ ဇနီးမယားသုံးယောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လူငယ်က ၎င်းရဲ့ ဒုတိယဇနီးဟာသူမရဲ့ ယခင်ယောကျာင်္းဖြစ်သူ
နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ ပေမယ့် ကလေးမရရှိခဲ့ ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဖြစ်ရတာဟာ အဆိုပါအ
မျိူးသားရဲ့ မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့် လို့ ယုံကြည်ရတာမို့ ထိုလင်မယားဟာ သားမျိူးစေ့ ပေးနိုင်မယ့် သူကို
ရှာဖွေခဲ့ ကြကြောင်း၊ ပထမတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူ့ ရဲ့ ဇနီးကိုယ်ဝန်ရှိလာစေဖို့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်ကို
အိမ်သုို့ ခေါ်လာခဲ့ ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် သူမက ထိုအဖိုးအိုနှင့်မပျော်ပိုက်တာမို့ မာတီယူဆီကိုသာ ကလူ၏
သို့ မြူ၏သို့ လုပ်ရန်မကြာမကြာ လာရောက်ခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ထိုအမျိူးသမီးဟာ သင်္ကြန်အမြောက်လို ဗလာကျည်သာရှိတဲ့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဆီပြန်မ
လာတော့ ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး မာတီယူ နဲ့ သာအတူနေခဲ့ လိုက်ပါတော့ တယ်...
အဲဒီကစပြီးတော့ သူ့ ရဲ့ ပထမဇနီးမယားလည်းထွက်သွားကာ သူလည်းလုံးရာကစပြားလာခဲ့ တော့ တာ
မာတီယူက ၎င်းရဲ့ နောက်မှပေါက်တဲ့ ရွှေကြာပန်းဟာ အလွန်ယားယံလေ့ ရှိပြီး ကုတ်မိယင်လည်း သွေးတွေ
ထွက်လာတတ်ပါတယ် လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ ဇနီးကတော့ ဒါဟာ မိန်းကလေးတို့ သဘာဝ လစဉ်အထာပြနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သူ့ ကိုပြောပြခဲ့ 
အဲလီဇဘက်ဘုရင်မ ဗဟိုဆေးရုံကြီးက ဒေါက်တာဗင်းဆင့် မိုယို ကတော့ အမျိူးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ 
သူ့ ရဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေပျောက်ပြီး အမျီူးသမီးတစ်ဦးရဲ့ အင်္ဂါတွေဖြစ်ပေါ်လာတာ ဟာယုတ္တိမရှိ၊ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
လို့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်...
ရွှေပြည်ကြီးမှာလည်း လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်အတန်ကြာက ထိုကဲ့ သို့ မောင်မစ္စက ( ယောကျာင်္းဘ၀မှ မိန်းမဘ၀သို့ 
အဟုတ်တစ်ကယ် ပြောင်းလဲ ) ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်း ဂျာနယ်တွေထဲမှာပါခဲ့ ဖူးပါတယ်...
သူတစ်ပါးဇနီးမယားကို ခိုးယူပေါင်းသင်းတဲ့ အတွက် ( သူကတော့ ပြောင်ကိုလုယူတာပါပဲ..) အခုဘ၀မှာပဲ
A distressed man in Malawi claims he has developed female genitals and his testicles keep disappearing. 25-year-old Jali Mateyu says his wife confirmed that female genitalia had grown out of his anus. “Two years ago I developed strange human flesh on my anus and my wife confirmed to me that they were female genitals but they disappeared.” Mateyu explained.
“But in June this year they reappeared just between the anus and the genitals. My member shrunk and later disappeared. There were only female genitals,” he continued. Mateyu immediately sought the assistance ofatraditional healer who cut the alleged female genitals withaknife and sprinkled herbs on them. “They were cut and herbs were applied. Now male genitals have resurfaced but they are too weak; I can’t perform in bed,” Mateyu said.
Mateyu blames his suffering on black magic, and has accused both his mother-in-law and his second wife’s ex-husband for bewitching him and turning him intoawoman. Mateyu’s first wife ran away after he stole his second wife from another man, he believes that this is the motive for his first wife’s mother and his second wife’s ex-partner for using black magic against him.
The young man, who now has three wives explained how his second wife had been with her husband for many years but had not been able to produce children. Believing it was the husband who was seedless the couple looked forasuitable donor to sireachild. At first the husband brought home an old man to impregnate his wife, but she wasn’t happy with this choice and subsequently began paying Mateyu regular visits for hanky-panky.
Afterashort while the woman decided not to return to her barren husband and stayed with Mateyu instead, that is when his first wife left and the alleged female genitals arrived. Mateyu also revealed that his new female parts itchalot and sometimes bleed after they are scratched. His wife told him he is most likely menstruating. Dr Vincent Moyo from the Queen Elizabeth Central Hospital gaveastatement saying it was not possible foraman to develop female sexual organs.
Posted by Unknown | at 2:27 AM |5comments
Labels: news: mornig star
7-month-old baby has period
အသက် ၇ လနှင့် အပျိူဖော်ဝင်သည့် ကလေးငယ်...
Yuanyuan and her father
တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက် ၇ လသာရှိသေးသည့် သမီးငယ်လေးတစ်ဦးဟာ ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး အပျိူ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျီလင်းပြည်နယ်၊ ချန်ချွမ်းမြို့ မှ ယွမ်ယွမ် လို့ ချစ်စနိုးအမည်ပေးထားတဲ့ ကလေးငယ်မ လေး
ဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ လကစလို့ အပျိူဖြစ်တာ ၂ ခါတောင်မှရှိခဲ့ ပြီလို့ ဆိုပါတယ်...( အမျိူးသမီးများလစဉ် ဓမ္မတာ
ပန်းပွင့် တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်...)
ထိုကဲ့သို့ ထိတ်လန့် အံသြဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ ခြင်းအတွက် ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘတွေကတော့ သူမ မွေးကတည်းက
သောက်သုံးလာခဲ့ တဲ့ နို့ မှုန့် ကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ အပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
သို့ သော် တရုတ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်များကတော့ ကလေးငယ်များအရွယ်မရောက်ခင် ( ဟိုမုန်းဓါတ်တွေတိုး
တက်များပြားလာကာ ) အပျိူဖော်ဝင်ခြင်းများဖြစ်လာခြင်းအတွက်ထိုကုမ္ပဏီမှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ပြောဆို
ယွမ်ယွမ်လေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ ဂျူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ ကစပြီး သူမမှာ သွေးစလေးတွေထွက်နေ
တာတွေ့ ရှိခဲ့ ရပြီး ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာ တစ်ပါတ်ခန့် ကြာမြင့် ခဲ့ ပါတယ်...
" အဲဒီအချိန်တုံးက မသန့် ရှင်းတဲ့ ( ဓါတုဓါတ်ပစ္စည်းများပါဝင်တဲ့ ) နို့ မှုန့် အကြောင်းဟိုးလေးတစ်ကြော်ဖြစ်
ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်...ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း သမီးလေးကိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ အ
ဆိုပါတံဆိပ်နဲ့ နို့ မှုန့် ကို ချက်ချင်းရပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..." လို့ ယွမ်ယွမ်လေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက ဆိုပါတယ်...
သူဟာ ယွမ်ယွမ်ကလေးကို ဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ ပြီး ဆရာဝန်များနဲ့ ပြသခဲ့ ပေမယ့် ဘာကြောင့် ဒီလို
ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆရာဝန်တွေက အဖြေရှာမရနိုင်ခဲ့ ကြပါဘူး...
ဆေးစစ်ချက်အရတော့ ကလေးငယ်ရဲ့ အက်စထရိုဂျင်ဟိုမုန်း ဓါတ် (မ ဟိုမုန်းဓါတ်) ဟာသာမန်ကလေးငယ်
တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့် တာထက် အနည်းငယ်များနေတာကလွဲလို့ကျန်းမာသန်စွမ်းပါတယ် လို့ ဖော်ပြခဲ့ ပါ
အဆိုပါဆေးစစ်ချက်ကို ကလေးငယ်အားနို့ မှုန့် ဖြတ်ပြီး နှစ်ပါတ် အကြာမှာပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ် လို့ 
ယွမ်ယွမ် ရဲ့ ဖခင်ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကျီလင်းမြို့ ကျန်းမာရေးဌာနကတော့ ယွမ်ယွမ်ကလေးကို ကျီလင်းတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာ နောက်ထပ်တစ်
ဓါတုဓါတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ တရုတ်နို့ မှုန့် တွေကြောင့် ကလေးငယ်လေးတွေ ရင်သားတွေဖွံ့ ဖြိုးလာပါ
တယ်လို့ ဆိုတဲ့ သတင်း လွန်ခဲ့ တဲ့ လပိုင်းလောက်က ဖတ်ခဲ့ မိရာက အခုတော့ အပျိူပါဖြစ်လာရပြီဆိုလို့ 
အဲဒီနို့ မှုန့် မျိူးတွေ ရွှေပြည်ကြီးကိုရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးလေ...
A seven-month-old baby in China is believed to be the youngest to have started menstruation.
The baby - nicknamed Yuanyuan - from Changchun city in Jilin province, has already had her period twice since last month.
Her family has blamed it to the milk powder the girl has been consuming since her birth.
However, the authorities have already cleared the company, which was accused of producing products causing early puberty in babies.
Yuanyuan's mother found traces of blood on July 8, and the condition lasted for almostaweek.
The baby's next ‘period’ came on Aug 13, and also lasted for aboutaweek.
"At that time, the contaminated milk powder issue was widely discussed. So I immediately stopped feeding her with the brand," said Yuanyuan's father.
He brought Yuanyuan to the hospital but doctors could not diagnose the actual cause for her condition.
A medical report showed that the baby's was healthy, except that her estrogen (sex hormone) level was slightly higher thananormal baby.
Yuanyuan's father said the medical check was conducted two weeks after they stopped feeding the baby with the milk.
The Jilin Health Department has arranged for Yuanyuan to undergo another health check at The First Hospital of Jilin University.
Source: City Evening News, China
Posted by Unknown | at 12:50 AM |3comments
Labels: china, news: city evening news
ပေါင် ၃၀၀ ကျော်လေးသည့် တိုင် ယခုအထိဆိုဖာ
ပေါ်ထိုင်အိပ်ကာနို့် စို့ နေဆဲကျားပေါက်ကြီး...
ချိူချိူစို့ မယ် အမောင်ကျား...
ဆိုဖာခုံပေါ်မှာ ကွေးကွေးလေးနေပြီး သခင်ဖြစ်သူရဲ့ လက်ကိုနှာခေါင်းဖြင့် ဝှေ့ လို့ တစ်မျိူးတစ်အိမ်ထဲနေအ
ပေါင်းအသင်း ခွေးတွေကိုစလို့ တစ်ဖုံနဲ့ ပန်ဂျိူ ဟာတစ်ကယ့် အိမ်မွေးကြောင်တစ်ကောင်နဲ့ မခြားပါပဲ...
ဒါပေမယ့် သူကတော့ အလေးချိန် ၁၄၆ ကီလို ( ပေါင် ၃၀၀ ကျော် ) ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားကျားတစ်ကောင်ဖြစ်နေ
ဘင်္ဂလားကျားတွေဟာ သဘာဝအတိုင်းတောထဲမှာဆိုယင်တော့ ဘယ်တိရိစ္ဆာန်ကိုမှ မကြောက်တဲ့ သားရိုင်း
တောမုဆိုးတွေဖြစ်ပေမယ့် ကျားကြီးပန်ဂျိူ ကတော့ သူ့ ကိုမွေးစားထားတဲ့ သခင်ဖြစ်သူ ဂူဆေးဖာနန်ဒက်စ်
နဲ့ မိသားစုဝင်တွေနှင့် အတူ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ပရီတိုးရီးယားမြို့ ကနေအိမ်မှာ ကစားနေရတာကို ပိုပြီး
ပန်ဂျိူကို ၎င်းအသက် ၃ပါတ်သားအရွယ်မှာ သူ့ မိခင်ကျားမကြီးကစွန့် ပစ်သွားလို့ သေလုမြောပါးဖြစ်နေချိန်
မှာ ကောက်ယူကာ ပြုစုယုယမွေးမြူထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဖာနန်ဒက်စ် ဟာပိန်ချူံးချိနဲ့ နေတဲ့ ကျားကလေးပန်ဂျိူ ကိုချက်ချင်းပဲ အိမ်ကိုသယ်ဆောင်လာပြီး ကိုယ်တိုင်
ပဲပြုစုစောင့် ရှောက်ကျွေးမွေးခဲ့ လို့ အခု ၁၉ လသားအရွယ်မှာတော့ သန်မာထွားကျိူင်းလာပါပြီ...
ပန်ဂျိူကိုအိမ်ထဲမှာလှည့် ပါတ်သွားလာနေတာ၊ သူ့ သခင်တွေနဲ့ တိုးဝှေ့ ပွတ်သပ်ကျီစယ်နေတာ၊ မီးဖိုချောင်
ခုံတန်းလျားပေါ်ကိုခုန်တက်ပြီး ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ခွေးတွေဖြစ်တဲ့မီလိုနဲ့ စကိုင်း တို့ နဲ့ ကစားနေတာကို ပုံမှန်
လူ၊ ကျား၊ ခွေး သုံးယောက်တို့ ရဲ့ လူနှင့် တိရိစ္ဆာန်ကြားကချစ်ခင်မှုသံယောဇဉ်ကတော့ အခိုင်မြဲဆုံးပါပဲ...
ဆာရင်စား၊ မောယင်နား... တို့ အတွက်တော့ မင်းဟာ သား...
" သူဟာ ခွေးတွေနဲ့ ဆော့ နေတာပါပဲ...ခွေးတွေက သူ့ ရဲ့ အရိုးကို ခိုးကာကိုက်ချီယူသွားတယ်...ပြီးတော့ 
တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် လိုက်တမ်းပြေးတမ်းဆော့ နေတော့ တာပါပဲ...သူဟာခွေးတွေကို ဘယ်တော့ မှ
နာကျင်အောင်မလုပ်ပါဘူး...သူတို့ ဟာတစ်ကယ့် ကိုခင်တဲ့ ကစားဖော်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေပါပြီ..." လို့ 
သူဟာ အခုမနည်းကိုအကောင်းကြီးလာပြီမို့ စိုးရိမ်စရာဖြစ်၇လောက်ပေမယ့် ယခုသူ့ ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ
အမှန်တော့ အရွယ်ရောက်ပြီးကျားတစ်ကောင်ရဲ့ တစ်ဝက်မျှသာပဲရှိနေပါသေးတယ်...
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မောင်ခွေးတို့ နဲ့ အတူ...
ပြီးတော့ ပန်ဂျိူဟာ ကလေးစိတ် ( အကောင်ပေါက်လေးရဲ့ စိတ် ) ပဲရှိနေပါသေးတယ်...အခုထက်ထိ ဖာနန်
ဒက်စ် ကသူ့ ကိုပုလင်းနဲ့ နို့ တိုက်နေရဆဲပဲဖြစ်ပြီး ညဘက်တွေမှာ သူနို့ မသောက်ရယင် အော်ဟစ်နေတတ်
သူတစ်ကယ်ဆာလာပြီဆိုယင်တော့ ရေခဲသေတ္တာကို အတင်းအဓမ္မ ခုန်အုပ်၊ ကုတ်ခြစ်နေတတ်ပါပြီ...
" သူ့ နဲ့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် မိသားစုကြားက သံယောဇဉ်ကတော့ ထူးထူးခြားခြားပြောစမတ်ပါပဲဗျာ...
ညဘက်တွေဆို သူဟာကလေးတစ်ယောက်လို ပဲငိုပြီးနို့ တောင်းတတ်ပါတယ်...သူက အိမ်ရှေ့ ကဆိုဖာခုံ
ကြီးပေါ်မှာ လှဲပြီးနို့ သောက်နေတတ်ပါတယ်...တစ်ကယ့် ကိုချစ်စရာ၊ ကြည်နူးစရာပါပဲ..." လို့ ဖာနန်ဒက်စ်
ပန်ဂျိူရဲ့ မိသားစုအချစ်တော်အဖြစ်နေရမယ့် ရက်တွေကတော့ ကုန်ဆုံးဖို့ တစ်ဖြေးဖြေးနီးလာနေပါပြီ...
တိရိစ္ဆာန်သဘာဝအရ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ သဘောရှိတဲ့ ကျားတစ်ကောင်အတွက် အခုလို နေရာကျဉ်း
ကျဉ်းလေးထဲမှာ သူ့ ကိုထားတာဟာ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်လို့ ပါပဲ...
ဖာနန်ဒက်စ် ကတော့ သူနဲ့ မိတ်လိုက်ပြီးသားဖောက်နိုင်ဖို့ကျားအဖော်တစ်ကောင်ရှာဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်...
Posted by Unknown | at 12:06 AM |2comments
The courgette that won't stop growing...
သူမအရပ်က ၅ ပေ ၃ လက်မ...သီးလာတဲ့ အသီးက ၅ ပေ ၆ လက်မ....
ဗူးသခွားမျိူးကို ယခုမှစတင်စမ်းသပ်စိုက်ပျိူးသည့် မာရီယာဒေစီမုန်း တစ်ယောက်သူမ စိုက်သည့် အပင်မှ
အရှည် ၅ ပေ ၆ လက္မရှိ ဗူးသခွားသီးကြီးသီးနေခဲ့ သဖြင့် သူမ၏ဖခင် ကိုင်းသမားကြီးပင် မနာလိုစရာဖြစ်
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိအမျိူးသမီးကြီးဟာ သူမရဲ့ စိုက်ခြံဥယျာဉ်ထဲမှာ ယခုကဲ့ သို့ ကြီးမားရှည်လျားလှ
သည့် အသီးအနှံကြီးကိုတွေ့ မြင်ရလို့ အံ့ သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့ ရပြီး ထိုဗူးသီးဟာ မဆွတ်ခူးခင် အရှည် ၆ ပေ
အထိရှိလာလိမ့် မယ်လို့ သူမက မျှော်လင့် ထားပါတယ်...
လာပြန်ပြီနောက်တစ်လုံး ....သူကလည်း ငါးပေလောက်ရှိနေပါပြီ....
သူမရဲ့ ခြံထဲမှာပဲနောက်ထပ်ဗူးသီးတစ်လုံးဟာ အရှည် ၅ ပေနီးပါးရှိနေပါပြီ...
သူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဘီနီတိုမိုင်အို ဟာဗူးသခွားပင်စိုက်စားလာတာ နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာခဲ့ ပေမယ့် ကိန်းဘ
ရစ်အရပ်က သူမရဲ့ King's Hedges ဥယျာဉ်ခြံက ကြိုးစားအားထုတ်မြေတောင်မြှောက်လို့ ထွက်ရှိလာတဲ့ အ
သီးအနှံတွေက သူ့ ရဲ့ အသီးအနှံတွေကို သိမ်ငယ်စေခဲ့ ပါတော့ တယ်...
ဗူးကောင်းတော့ စင်ခံ၊ လင်ကောင်းယင်စံတဲ့ ....
စကားပုံတော့ ရှိလေရဲ့ ...
" ကျွန်မက အယင်ကဗူးသီးမျိူးတွေတစ်ခါမှ မစိုက်ဖူးခဲ့ ပါဘူး...ဒါပေမယ့် စိုက်တော့စိုက်နေချင်ခဲ့ တာပါ...
အဖေကတော့ အမြဲပဲဗူးမျိူးတွေစိုက်ခဲ့ တာဖြစ်ပေမယ့် ဒီလောက်ကြီးမားရှည်လျားတဲ့ ဗူးသီးမျိူးတစ်ခါမှ မ
ရခဲ့ ပါဘူး...အဖေကတော့ ( ကျွန်မကို ) တစ်ကယ်ပဲ အထင်ကြီးသွားခဲ့ ပါတယ်...
အခုတော့ ဒီဗူးသီးဟာ အောက်ခြေမြေကြီးအထိမေ၇ာက်သေးပါဘူး...ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်တစ်ပေလောက်
ထပ်ရှည်လာဦးမယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်...ဒါကြောင့် အဲဒီဗူးသီးကိုမခူးသေးပါဘူး...နောက်ဆုံးဆက်ပြီးမ
ကြီးထွားတော့ ဘူးဆိုမှ ခူးပြီးချက်စားပါ့ မယ်...ကျွန်မအဒေါ်တွေကလည်း ဒီဗူးရှည်သီးကို လိုချင်နေကြပါ
တယ်..." လို့ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မာရီယာကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
Novice courgette grower Maria Desimone has made her gardener dad green with envy after cultivatinga5ft 6in whopper at her first attempt. The 43-year-old was shocked to see the massive vegetable growing in her garden – and she hopes it will reach 6ft before she harvests it. She hasasecond specimen just short of 5ft.Despite her dad Benito Maio having grown courgettes for several years, his daughter’s efforts at her garden in King’s Hedges, Cambridge, have left his specimens in the shade.
Posted by Unknown | at 2:34 AM |2comments
Labels: news:daily mail
ခြေထောက်လေးချောင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့ ငါး....
ခြေလေးချောင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့ ငါး...
ပုံစံကြည့် ရတာကတော့ သူဟာရေကူးရတာများလွန်းလို့ ပင်ပန်းသွားတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ဒီလိုဆန်းကြယ်တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ ငါးကတော့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အောက်မှာ ညနေခင်းအညောင်း
ပြေ လမ်းလျှောက်ထွက်နေတယ်လို့ ထင်နိုင်စရာပါပဲ....
ငါးအကောင်ငယ်လေးများအပါအ၀င် ရေအောက်သတ္တ၀ါလေးများကို ဖမ်းယူစားသောက်လေ့ ရှိတဲ့ အဆိုပါ
ငါးမုဆိုးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခြေထောက်တွေပေါက်နေတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အမှန်တော့ ထိုအရာတွေဟာ သူ့ 
ရဲ့ ဆူးတောင်တွေကို ခြေထောက်ကဲ့ သို့ အသုံးပြုပြီး ပင်လယ်ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဖြစ်
အောင် သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထောက်ကန်ကာထိန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာ အနားကနေဖြတ်သွားမယ့် ရေသတ္တ၀ါလေးတွေကို ပါးစပ်ပေါက်အပေါ်နားမှာရှိတဲ့ နှင်တံလိုအရာ
လေးနှင့် ဆွဲဆောင်ဖြားယောင်းပြီး သူ့ ဆီလာအောင်လုပ်ယူကာ တစ်ဟုတ်ထိုးတိုက်ခိုက်ဖို့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒ
ရာကြမ်းပြင်မှာ ငြိမ်သက်စွာ စောင့် ဆိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်...
"ငါးမုဆိုးမျိူးစိတ်အတော်များများကို ရုတ်တရက်ခြုံခိုတိုက်ခိုက်စားသောက်တတ်တဲ့ ရေအောက်သတ္တ၀ါတွေ
သူတို့ ရဲ့ ဆူးတောင်တွေကိုက သဘာဝအတိုင်းပဲ ခြေလက်တွေပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေပြီး ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှာ မ
လှုပ်မယှက်ငြိမ်သက်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ အမှုံမျှမထအောင်နေနိုင်ပြီး ရုပ်ဖျက်ကာ သားကောင်ကိုစောင့် ဆိုင်းနေ
ပြီးတော့ သူတို့ ရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်အပေါ်နားကခေါင်းထိပ်နားမှာရှိတဲ့ အေရီယာယ်တိုင် ( နှင်တံ ကဲ့ သို့ အရာ )
ကို သုံးပြီး သားကောင်ကို မြူဆွယ်ပါတော့ တယ်..." လို့ အသုံးချဇီဝသိပ္ပံဗဟိုဌာနက ဖေရီအာချဲလ် ကပြော
ထိုမျိူးစိတ်တွေရဲ့ အများစုဟာ သမုဒ္ဒရာရေအောက်အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး တစ်
ချိူ့ သောမျိူးစိတ်တွေကိုတော့ အပူပိုင်းဇုံဒေသရေတိမ်ပိုင်းတွေမှာလည်းတွေ့ ရှိရတတ်ပါတယ်...
ယခုတွေ့ မြင်ရတဲ့ ရင်သတ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံကိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ပင်လယ်ရေပြင်ကို လေ့ 
လာနေတဲ့ သိပ္ပံရှင်များက အထူးတီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာနှင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေအောက်ကင်မရာဖြင့် ရိုက်
သတ္တလောက၊ သြကာသလောက၊ သင်္ခါရလောက ဆိုတဲ့ လောက သုံးပါးကတော့ အလွန်ပဲ ဆန်းကြယ်လှ
ဒေလီမေးလ် သတင်းမှ ကူးယူတည်းဖြတ်ဖော်ပြပါတယ်...
The fish rests on the ocean floor as he prepares to makeadart for any passing prey he has lured towards him using the protrusion above his mouth
Faye Archell, of the Centre of Applied Zoologym said: 'Many species of Angler Fish are what are known as ambush predators. Their fins have adapted as limb like structures to allow them to remain stationary on the sea bed while causing minimal disturbance to the substrate and remaining totally camouflaged.
Most of these species live in the great depths of the oceans, but some are found in shallower, tropical environments.
Posted by Unknown | at 1:34 AM | 1 comments
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံရှိ မိသားစုဦးရေများပြားသည့် အိမ်တစ်အိမ်တွင် အိမ်ဖော်အဖြစ် ၅ လကြာသွးရောက်
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ သည့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိ အမျိူးသမီးကြီးတစ်ဦးအား အိမ်ရှင်များမှ
သူမ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသုံး သံချောင်းများ ထိုးစိုက်ရိုက်သွင်းပြီး နှိပ်စက်စေခိုင်းခဲ့ ကြသည်ဟုဆိုပါသည်...
လွန်ခဲ့ သည့် စနေနေ့ ညက ဆော်ဒီနိုင်ငံ၊ ရီယာ့့ဒ် မြို့ တော်မှ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြိုတော်သို့ လေ
ယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် အရိယာဝါသီ အမည်ရှိတဲ့ ( သူတော်ကောင်းကဲ့ သို့ နေသူလို့ များအ
ဓိပ္ပါယ်ပြန်ယင် ရမယ်ထင်ပါတယ်...) ထိုအမျိူးသမီးကြီးကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့ သူမရဲ့ သားသမီးများက လွန်
ခဲ့ တဲ့ တနင်္လာနေ့ ကပဲ ဆေးရုံကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ကြပါတယ်...
ဓါတ်မှန်ရိုက်ကူးစစ်ဆေးချက်များအရ သူမကိုယ်ခန္ဓာမှာ သံချောင်းပေါင်း ၂၃ ချောင်းအထိ ထိုးစိုက်နစ်ဝင်
နေခဲ့ တယ်လို့ မြင်တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်...
တစ်ချိူ့ သံချောင်းတွေဆို ၅ စင်တီ ( ၂ လက်မနီးပါး ) အထိရှည်ပါတယ် လို့ကမဘူရူပိတီယ ဆေးရုံးမှ ဆ
ရာဝန် ပရာဘတ်ဂဂျာဒီရာ က AOL သတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
"သံချောင်းအများစုဟာ ခြေထောက်နဲ့ လက်များမှာထိုးသွင်းထားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူမကိုဘယ်နှစ်ချောင်းအထိ
ထိုးသွင်းနှိပ်စက်ခဲ့ တယ်ဆိုတာတောင် သူမအနေနဲ့ မမှတ်မိနိုင်ခဲ့ ပါဘူး..
သူမက သူတို့ အာရပ်ဘာသာစကားမပြောတတ်တာမို့ သူတို့ ဟာ သူမဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်
ကြပါဘူး..." လို့ ဒေါက်တာ ဂဂျာဒီရာ ကဆက်ပြောပြပါတယ်...
ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ အရိယာဝါသီ ....
Sri Lankan maid L.T. Ariyawathi, left, talking toanurse while receiving treatment atahospital in Batticaloa on Wednesday - AFP/Getty
ဒါပေမယ့် သူမက သီရိလင်္ကာ၊ သီရိလင်္ကာ လို့ ပဲ အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေခဲ့ လို့ သူမအိမ်ကိုပြန်ချင်တယ်
ဆိုတာသဘောပေါက်သွားကြလို့ သူမကို လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်ခဲ့ လိုက်ကြပါတယ်...
ထိုအမျိူးသမီးကြီးဟာ ဆော်ဒီလေဆိပ်မှာရော၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံလေဆိပ်မှာပါ သူမကို သံချောင်းတွေနဲ့ ထိုး
သွင်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း တစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ ပါဘူး လို့ လည်း ဆရာဝန်ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ထိုခန္ဓာကိုယ်ထဲက သံချောင်းတွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များရဲ့ လုံခြုံရေးအရစစ်ဆေးတဲ့ စက်ကိရိ
ယာများက မတွေ့ ရှိခဲ့ကြပုံရပါတယ်...
သူမအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ မှ သားသမီးတွေကို ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်တွေအကြောင်းပြောပြခဲ့ လို့ ၎င်းတို့ က
သူမကို ဆေးရုံသို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်များဆိုင်ရာဌာန ကတော့ ထိုအမျိူးသမီးကြီးတက်ရောက်ရာဆေး
ရုံသို့ အဖွဲ့ တစ်ခုစေလွှတ်ပြီး သူမထံမှ ထွက်ဆိုချက်ရယူကာ ရီယာ့့ဒ်မြိုရှိသီရိလင်္ကာသံရုံးနှင့် သီရိလင်္ကာ
နိုင်ငံရှိ ဆော်ဒီသံရုံးတို့ ကို ထိုဖြစ်ရပ်အားအကြောင်းကြားကာ အမျိူးသမီးကြီးအား ခေါ်ယူအလုပ်ခန့် အပ်
စေခိုင်းခဲ့ သည့် ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ မိသားစုအား အရေးယူနိုင်ရန်စီစဉ်နေပါတယ် လို့ သီရိလင်္ကာနေ့ စဉ်သတင်း
မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် များဆိုင်ရာ ( ကြီးကြပ်ရေး ) ဌာနအနေနဲ့ ထိုအိမ်ဖော်အမျိူးသမီးကြီး
အားလူမဆန်စွာ သံချောင်းများထိုးပြီး နှိပ်စက်ခဲ့ သသည့် အလုပ်ရှင်နှင့် ၎င်း၏မိသားစုထံမှ အမြင့် မားဆုံး
သောလျှော်ကြေးငွေရရှိစေဖို့ နည်းလမ်းမျိူးစုံ၊ အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ အဆိုပါဌာ
နရဲ့ အကြီးအကဲ ဘာတာဂိုဒါ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လက်ထဲမှာပါ သံချောင်းတွေစိုက်သွင်းနှိပ်စက်ခဲ့ ကြတယ်...
An X-ray of Ariyawathi's palm showing the imbedded nails - AFP/Getty
သူမကို သံချွန်တွေနဲ့ မထိုးချင်မှာ ထိုသံတွေကို မီးနဲ့ အပူပေးတတ်ကြပါသေးတယ် လို့ လည်းသူမကပြော
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ မာတာရာ မြို့ မှာနေထိုင်တဲ့ အရိယာဝါသီ က သူမအလုပ်လုပ်ခဲ့ တဲ့ မိသားစုမှာမိသားစုဝင်
တွေအများကြီးရှိပြီး ထိုသူများအားလုံးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာမို့ သူမအနေနဲ့ အနားမရှိပဲအ
မြဲမပြတ်တရစပ်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ ရကြောင်း၊ ပင်ပန်းလွန်းလို့ အနားယူမယ်ကြံလိုက်တိုင်း သူတို့ ကအပြစ်ပေး
တဲ့ အနေနဲ့ သံချောင်းတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ထိုးသွင်းခဲ့ ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သူမက သတင်းဦးသတင်းထူး ရုပ်သံသတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မဟာမိုးလင်းကမိုးချူပ်တစ်ချိန်လုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့ ရပါတယ်...အိပ်စက်ချိန်မရှိသလောက်ပါပဲ...သူတို့ 
က ကျွန်မကို ရိုက်နှက်ကြပြီး သတ်ပစ်ကာအလောင်းကိုဖျောက်ပြစ်မယ်လို့ လည်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ ကြပါသေး
တယ်..." လို့ အရိယာဝါသီက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူမဟာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို သူမရဲ့ စားရိတ်နဲ့ ပြန်လာခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...
" သူတို့ အားလုံးဟာ အကြင်နာတရားလုံးဝမရှိတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်ပါတယ်...ကျွန်မက သူတို့ ဘာ
သာစကားမပြောတတ်လို့ အခုလိုပိုပြီးနှိပ်စက်တာလို့ ပဲ ယုံကြည်ပါတယ်...
သူတို့ ဘာကိုခိုင်းတယ်ဆိုတာနားမလည်လေ သူတို့ ကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လေပါပဲ...အိမ်ရှင်အမျိူးသားက
သူမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲကို သံချောင်းတွေထိုးသွင်းတာကို မိန်းမဖြစ်သူကလည်း ၀င်ရောက်ကူညီတာပါပဲ...က
လေးတွေကလည်း ဓါးတွေနဲ့ ကိုင်ပြီးကျွန်မကို ခြိမ်းခြောက်ကြပါတယ်..." လို့ သူမကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားပေါင်း ၈ သန်းရှိပြီး အများစုကတော့ အာရှတိုက်နိုင်ငံများမှပဲ
ဖြစ်ကြပါတယ်...( အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ ရှ် စတဲ့ နိုင်ငံတွေကအများစုပါ )
ထိုအလုပ်သမားများဟာ အလုပ်ရှင်များရဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ကျေးကျွန်များကဲ့ သို့ ဆက်ဆံစေခိုင်းခြင်းတွေ
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်တစ်ခုထဲမှာပဲ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသား နှစ်သန်းခန့် ဟာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်
လုပ်ကိုင်ဖို့ ထွက်ခွာခဲ့ ကြပါတယ်...
ထိုအထဲက ၁.၄ သန်းဟာ အိမ်ဖော်များဖြစ်ကြပြီး အရှေ့ အလယ်ပိုင်းအာရပ်နိုင်ငံများမှာ အလုပ်လုပ်နေကြ
တာဖြစ်ပါတယ်...ဆော်ဒီတစ်နိုင်ငံတည်းမှာပဲ အိမ်ဖော်ပေါင်း ၄ သိန်းခန့် ရှိနေကြပါတယ်...
ထိုအထဲကအများစုသောအိမ်ဖော်တွေဟာ သူတို့ ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားနှိပ်စက်တာခံကြရပါ
နိုင်ငံခြားသားအိမ်ဖော်များဟာ တစ်နေ့ လျှင် ၁၂ နာရီမှ ၁၅ နာရီအထိဖြင့် တစ်ပါတ် ၇ ရက်လုံး နားရက်
မရှိ အလုပ်လုပ်ကြရပြီး လုပ်ခလစာများမရခြင်း၊ အစားအသောက်များမစားမသောက်ပဲနေရခြင်း တို့ အပြင်
တစ်ခါတစ်ရံ လိင်မှုဆိုင်ရာ စော်ကားကျူးလွန်ခြင်းများပင်ခံကြရတယ်လို့ ဆော်ဒီနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ
မှ တိုင်ကြားစာများ ထောင်နှင့် သောင်းနှင့် ချီပြီးနှစ်စဉ် ရရှိခဲ့ ကြပါတယ်...
တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ အရေးယူနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလျှင်လည်း ဒေသခံဘာသာစကားသို့ ပြန်ဆိုပေးမည့်
ဘာသာပြန်များအလုံအလောက်မရှိခြင်း၊ ဥပဒေကြောင်းအရ ကူညီထောက်ပံ့ မှုမရှိခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာသံရုံး၊
ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများမရှိခြင်း၊ ( ရှိပြန်သော်လည်းအခွန်ကောက်ခံခြင်းမှလွဲပြီးတစ်ခြားအကူအညီတောင်းမရ
ခြင်း ) တို့ ကြောင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့်အလုပ်ရှင်များကို အမှုတင်တရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့ မှုများလွန်စွာနည်းပါး
အကယ်၍၎င်းတို့ နိုင်ငံသားအလုပ်ရှင်ကို တရားဆွဲဆိုဖို့ ကြိုးစားခဲ့ လျှင်လည်း ထိုအလုပ်သမားဟာ အမှုရင်
မဆိုင်ရခင်မှာပဲ နိုင်ငံအတွင်းမှ ပြန်ပို့ ခြင်းခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာလည်း သူမကို ရေနွေးပူ၊ မီးအပူများနှင့် အပူတိုက်ခဲ့ တဲ့ အပြင် သူမရဲ့ သွားများကိုပါ အဓမ္မ
နှုတ်ပစ်ခဲ့ ကြသည့် အလုပ်ရှင်များကို တရားစွဲဆိုရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ သည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ အိမ်ဖော်မလေး
ကီနီဘင်တီကာဒါ ကို အမှုမလုပ်နိုင်မှီမှာပဲ ဆော်ဒီအာဏာပိုင်များက သူမနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ ခဲ့ ကြပါတယ်...
မိမိတို့ ရဲ့ မိသားစုအဆင်ပြေရေးအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းတစ်ပါးမှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ရသူတွေရဲ့ 
ဒါကြောင့် ရွှေပြည်ကြီးက ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများကိုလည်း အရှေ့ အလယ်ပိုင်းအာရပ်နိုင်ငံများ၊
အထူးသဖြင့် ဆော်ဒီနိုင်ငံကို အမျိူးသမီးများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းဆိုယင် သေသေချာချာ
အိမ်ဖော်အလုပ်ဆိုယင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ လခကောင်းတယ်ဆိုပါစေ မလုပ်သင့် ၊ မသွားသင့် ပါဘူး....
A 50-year-old Sri Lankan woman who worked asamaid foralarge family in Saudi Arabia for five months was allegedly tortured by having nails hammered into her body.
L. T Ariyawathi, who flew back to Colombo, Sri Lanka, from Riyadh on Saturday night, was brought to the hospital by her concerned children Monday.
X-rays showed there were 23 nails embedded in her body.
"Some of the nails were 5cm long," Dr. Prabath Gajadeera of Kamburupitiya Base Hospital told AOL News. "Most of the nails were embedded in her arms and legs. She didn't even realize how many were in there."
"She didn't speak their language and they didn't understand her," Gajadeera said.
"But she kept saying 'Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka' and they realised she wanted to go home. So they brought her to the airport."
Gajadeera said the woman did not say anything about the nails in her body at either the airport in Saudi Arabia when she was leaving nor when she arrived at the airport in Sri Lanka.
The nails were apparently not detected by airport security devices, Gajadeera said.
Ariyawathi told her children about her injuries after her arrival, and they took her to the hospital, he said.
The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, who sent an envoy to the hospital to record her statement, plans to take action against the Saudi family who employed the woman and has informed the Sri Lankan Embassy in Riyadh and the Saudi Embassy in Sri Lanka, the Daily News of Sri Lanka reported Wednesday."The bureau will take every action to get maximum compensation from the employer for the inhumane treatment he and his family had inflicted on the maid by inserting nails in her body," said bureau official H. Batagoda.A Sri Lankan TV network, Newsfirst Sirasa, spoke to the woman, who showed its reporter the marks from the nails on her body.She said some of the nails had been heated prior to insertion.
Ariyawathi from the town of Matara, said there were many people in the Saudi household where she worked.
"I had to work from dawn to dusk. I hardly slept. They beat me and threatened to kill me and hide my body." Ariyawathi said she flew back to Sri Lanka at her own expense.
Ariyawathi said the male head of the household inserted the nails and his wife helped him, adding that the family's children also threatened her with knives.
According to Human Rights Watch, the estimated eight million foreign workers in Saudi Arabia are suffer multiple abuses and exploitation, and sometimes slavery-like conditions. Saudi's foreign embassies report thousands of complaints each year from domestic workers forced to work 15-20 hoursaday for seven daysaweek, who are denied their salaries, denied food and drink and sometimes even subjected to sexual abuse.
Source: Aolnews.comImages Source: AFP/Getty/ Daily Mail
Posted by Unknown | at 1:53 PM |5comments
Labels: news: AOLnews.com/ daily mail
ရုရှားက အံ့ ဖွယ်တ၇ားးစီရင်ချက်....
ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာသူကို ကားနဲ့ ဝင်တိုက်မိလို့ သေသွားတာ ထောင်ဒါဏ်သုံးနှစ်...
ဒါတောင် နောက်ထပ် ၁၄ နှစ်အထိထောင်ထဲသွားစရာမလိုသေးဘူးတဲ့ ...
ကားလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်လာသူနှစ်ဦးကို ကားဖြင့် ဝင်တိုက်ခဲ့ လို့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ 
ထိပ်ပိုင်းအထက်တန်းလွှာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်ရှုတ်ချပြောဆိုမှုတွေဖြစ်စေခဲ့ သည့်ဝန်
ကြီးချူပ်ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ စီးလုံးညီညွတ်သောရုရှားပါတီ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးအမျိူးသမီးတစ်ဦးကို
တရားရုံးတော်က ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ ထောင်ဒါဏ်ကျခံရန်မလို ( ဆိုင်းငံ့ ထောင်ဒါဏ်ပေါ့ လေ...) ဟုအမိန့် 
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ အင်နာရှာဗင်ကိုဗာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ သူမပါဝင်သည့် 
ထိတ်လန့် ဖွယ်ရာယာဉ်တိုက်မှုကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ဗီဒီယိုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ပြီး ယခုနှစ်အစောပိုင်း
တွင် ယူကျု အင်တာနက်ဗီဒီယိုစာမျက်နှာမှာ တင်ထားခဲ့ လို့ နိုင်ငံအ၀ှမ်း ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ ပါ
သူမမောင်းလာတဲ့ ကားအရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ ကားလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုကျော်တက်ကာ ဆိုက်ဘေး
ရီးယားဒေသ ၊ အီယကွတ်စ်ခ်မြို့ လယ်ကလမ်းဘေးမှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ညီအစ်မနှစ်ဦးကို ၀င်တိုက်မိ
ညီအစ်နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးကသေဆုံးခဲ့ ပြီး၊ ကျန်တစ်ဦးမှာတော့ တစ်သက်လုံး ဒုက္ခိတဖြစ်သွားခဲ့ ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့ တဲ့ အင်္ဂါနေ့ မှာတော့ ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးက သူမကိုလူသေစေမှုဖြင့်အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ကာ
ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှမကြားဖူးခဲ့ သည့် ခြွင်းချက်အနေဖြင့် သူမဟာ မကြာခင်ကမှမွေးဖွားခဲ့ သည့် သူမ၏ရင်
သွေး အသက် ၁၄ နှစ်ပြည့် သည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တိုင်အောင် အကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်ကာ အပြစ်ဒါဏ်
စတင်ကျခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တရားရုံးအမိန့် ထဲမှာဖော်ပြထားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ရုရှားပြည်သူများအနေဖြင့် အစိုးရဟာ အထက်တန်းလွှာများ၊ အခွင့် ထူးခံများအ
တွက် ဥပဒေတစ်မျိူး၊ ၎င်းတို့ လိုသာမာန်လူတန်းစားများအတွက်ဥပဒေတစ်မျိူး ခွဲခြားကျင့် သုံးနေတယ်လို့ 
ဆိုတဲ့ သံသယကို ပိုမိုကြီးမားစေလာမှာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါအမှုရဲ့ တရားခံရော၊တရားလိုများပါ ထပ်မံပြီးအယူခံဝင်ကြဦးမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်...
မိခင်ဖြစ်သူက ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ မစ္စရှာဗန်ကိုဗာဟာ အခင်းဖြစ်
ပွားချိန်မှာ သူမကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ တာကိုအရေးမစိုက်သလိုမျိူး ပြုမူခဲ့ တာကြောင့် လူအများက
သူမဟာကားနှင့် တိုက်ခံခဲ့ ရတဲ့ အမျိူးသမီးနှစ်ဦးကို လုံးဝအရေးမစိုက်ပဲ သူမရဲ့ ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွား
သည်ကိုသာအလျင်အမြန်ကြည့် ရှုစစ်ဆေး ခဲ့ ပြီး အရေးပေါ်သူနာတင်ယာဉ်မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားတစ်စုံတစ်
ယောက်သောသူဆီကိုသာ ဖုန်းဆက်နေခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆက်အသွယ်ကြောင့် သူမကိုအထူးအခွင့် အရေးပေး
ကာဆက်ဆံခဲ့ တယ်လို့ လည်း ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ ဟာစွပ်စွဲခံခဲ့ ရပါတယ်...
အင်တာနက်ပေါ်မှာ သူမရဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုအဖြစ်အပျက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပေါ်လာပြီး နောက်လအတန်ကြာမှ
သူမကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားရုံးတွင်စွဲချက်တင်ခဲ့ ပြီး၊ ထူးဆန်းစွာပင် သူမအနေနှင့် အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာ အ
ရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲထားခဲ့ သလားဆိုတာကိုလည်း ရဲများက မစစ်ဆေးခဲ့ ကြပါဘူး...
( သြော်...ကလေးကငယ်သေးလို့ ကလေးကြီးလာမှ ထောင်ဒါဏ်ကျခံစေပေါ့ နော်...အမြော်အမြင်သနား
အာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချူပ်တဲ့ တိုင်းပြည်များမှာတော့ ဒီလိုမျိူးဘက်လိုက်မှုတွေဟာ ဖြစ်နေမှာပါပဲ...
ထိုတိုင်းပြည်ကို ဆရာတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာလည်း ဥပဒေအထက်မှာ မည်သူမျှမရှိစေရဆိုပြီး ပြစ်မှု
တွေအများကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့ ( သူတို့ အဆိုအရပေါ့ ၊ အမှန်တော့ ပုလင်းတူဗူးဆို့ ပါပဲ...) သူကို လည်း
ကမ္ဘာ့ အံ့ ဖွယ် ဆိုင်းငံ့ ထောင်ဒါဏ် တွေချမှတ်ပြီး အိမ်မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေးနေခိုင်းတာမျိူးလည်းရှိခဲ့ 
A political adviser to Vladimir Putin’s United Russia party who mowed down two pedestrians in her car triggeringabacklash against Russia’s elite has been told she does not need to go to jail until 2024.
Posted by Unknown | at 11:06 PM | 1 comments
Toothless robber turns out to be fairly easy to identify
သွားတစ်ချောင်းမှမရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက အမျိူးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ အတွက်သွားအတုတစ်စုံဝယ်
ယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဘေကျင်းမြို့ ကဘဏ်တစ်ခုကို ဓါးပြတိုက်ခဲ့ မှုဖြင့် အဖမ်းခံခဲ့ ရပါတယ်...
ကံမကောင်းလှစွာပင် အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ်ရှိ လီဟန် ကိုဒေသခံရဲတွေကကောင်းစွာသိနေခဲ့ တာမို့ ဓါး
ပြတိုက်ခံ၇တဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေက ဓါးပြရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ သွားတွေမရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ 
အကြောင်းပြောပြလိုက်တာနဲ့ သူ တို့ ဟာအမှုကိုစံချိန်တင်လောက်တဲ့ အမြန်နှုံးဖြင့် ချက်ချင်းပဲဖော်ထုတ်
နိုင်ခဲ့ ပါတော့ တယ်...
" သူ့ မှာက ( သွားတစ်ချောင်းမှမရှိတာမို့ ) သူများနဲ့ မတူ၊ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ရုပ်လက္ခဏာရှိနေပါတယ်...ပြီး
တော့ သူစကားပြောယင်လည်းသူများနားလည်အောင်၊ မနည်းကြိုးစားပြီးပြောနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်.."
ဟန် ဟာလက်နက်ကိုင်ဓါးပြတိုက်မှုဖြင့် ယခုအခါမှာတော့ ထောင်ဒါဏ် ၁၅ နှစ်အထိကျခံရဖွယ်ရှိနေပါ
" သူ့ မှာသွားတွေမရှိတာမို့ တစ်ချိန်လုံးသူ့ စကားတွေက ဗလုံးဗထွေးဖြစ်နေတာမို့ သူဘာကိုပြောတယ်
ဆိုတာ ဘယ်သူမှနားမလည်ကြပါဘူး...ဒါကြောင့် သူဓါးပြတိုက်နေတဲ့ ငွေကိုင်စာရေးမကို သူအလိုရှိတာ
နားလည်စေဖို့ လေးငါးကြိမ်မကပြောနေခဲ့ ရရှာပါတယ်..." လို့ ရဲအရာရှိကထပ်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သွားတစ်ချောင်းမှမရှိလို့ စကားကိုမနည်းရှင်းအောင်ပြောနေရတယ့် သူက ဓါးပြတိုက်ရတယ်လို့ ဗျာ...
နောက်တစ်ခါဆို ဗေဒင်ဟောစားဖို့ အကြံပေးလိုက်မယ်...
A toothless robber in China has been arrested after he tried to robaBeijing bank so that he could affordanew set of teeth.
'He hasaa very distinctive appearance and has trouble making himself understood when he speaks," said one officer, who added that Han now faces 15 years in jail for armed robbery.
'His lack of teeth means that his lisps all the time so nobody knows what he's saying. He had to tell the cashier what he wanted four or five times before she understood,' the officer added.
Posted by Unknown | at 2:14 PM |2comments
အသက် ၅၀ အရွယ် ဘရန်ဒါအယ်လီဆန် အမည်ရှိဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ငွေစာရင်းမန်နေဂျာအမျိူးသမီးကြီးဟာ
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အကြွေစေ့ များ၊ တွယ်ချိတ်များ၊ သံလိုက်တုံးများနှင့် သတ္တုအဖုံးများကဲ့ သို့ သောသံ၊
သတ္တုပစ္စည်းများကို သံလိုက်ကပ်သကဲ့ သို့ ကပ်ထားနိုင်ပါတယ်...
သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သံလိုက်စွမ်းအားကြောင့် မော်တော်ကားများရဲ့ အချက်ပေးသံများအလိုအလျောက်မြည်
စေခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလှိုင်းများပြတ်တောက်စေခြင်းတို့ အပြင် လျှပ်စစ်မီးသီးများပါ ပေါက်ကွဲစေတတ်
" ကျွန်မငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေက နာရီဝယ်မပေးတော့ ပါဘူး.... ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က သံလိုက်စက်
ကွင်းစွမ်းအားက နာရီရဲ့ အချိန်ကိုက်ထိန်းချူပ်မှုစနစ်ကို တားဆီးနှောင့် ယှက်နေလို့ ပါပဲ...
လျှပ်စစ်လှိုင်းများနှင့် ပါတ်သက်ပြီးတော့ လည်း ကျွန်မကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတာတွေကမကြာခဏမို့ တီဗီ
ပြင်တဲ့ သူတစ်ဦးကို အမြဲလိုလိုပဲခေါ်နေရပါတယ်...ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ လျှပ်စစ်ဓါတ်အဖိုနဲ့ အမ ဓါတ်
တွေကို လတစ်လရဲ့ အချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီး ထုတ်လွှင့် နိုင်ပါတယ်..." လို့ လည်း သူမကပြောကြားသွားပါ
ကလေးတစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်သူ သံလိုက်လူသားလို့ အမည်ပေးခံရတဲ့ အမျိူးသမီးက သူမအနေနှင့် ယခု
ကဲ့ သို့ ဆန်းကြယ်လှတဲ့ စွမ်းအားတွေကြောင့် မကြာခဏ ရှက်မိပါတယ်လို့ လည်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" တစ်ခါတုံးက စူပါမာ့ ကက်ကြီးတစ်ခုမှာတော့ တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ရပါသေးတယ်...အပြင်ကိုပြန်အ
ထွက်မှာ ဂိတ်ပေါက်ရောက်တော့ စစ်ဆေးတဲ့ စက်ဟာ ဖောက်ပြန်သွားခဲ့ ရပါတယ်...အစောင့် လုပ်တဲ့ သူ
က ကျွန်မကို သူ့ စက်ပျက်အောင် ဗူးဒူးအောက်လမ်းနည်းနဲ့ လုပ်ပါတယ် ဆိုပြီးအော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းပါတော့
တယ်..." လို့ သူမကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
သံ၊သတ္တုပစ္စည်းတွေဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ၄၅ မိနစ်လောက်ကြာအောင် တွယ်ကပ်နေတတ်ပြီး၊ သူမရဲ့ 
သွေးအားအကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ထိုပစ္စည်းတွေပြုတ်မကျအောင်တောင် ကခုန်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
သူမအရွယ်ရောက်လာတော့ ထိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သံလိုက်စွမ်းအားတွေဟာ လစဉ်အမျိူးသမီးများရဲ့ သဘာဝပန်း
ကလေးများပွင့် ပြီးချိန်မှာ အင်အားအများဆုံးဆိုတာ သိရှိခဲ့ ရပါတယ်...
လန်ဒန်မြို့ မြောက်ပိုင်း၊ ဟောလိုဝေး အရပ်က မစ္စအယ်လီဆင် ဟာ သူမမူကြိုတက်နေစဉ်မှာပဲသူမမှာသံ
" သံထည်ပစ္စည်းတွေက ကျွန်မဆီကိုပျံလာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီပစ္စည်းတွေကျွန်မအနား
မှာထားယင်တော့ ဆွဲအားတွေကို ခံစားရပါတယ်...ကျွန်မရဲ့ အရိုးနဲ့ ပိုပြီးနီးတဲ့ နေရာတေဂျီကျတော့ တာပါ
ပဲ..." လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
လူတိုင်းမှာတော့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတာပါပဲ...ဒါပေမယ့် စွမ်းအား
လျှပ်စစ်ဓါတ်ကုထုံးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင် ကေသီဂျမီနယန်နီ ကတော့ မစ္စအယ်လီဆန်အနေနဲ့ သူမ
ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သံလိုက်စွမ်းအားတွေများပြားနေတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
From small, Brenda Allison had metallic objects such as coins, safety pins, magnets and even metal lids stuck on her body.
The 50-year-old British accounts manager has also set off car alarms, interrupted television signals and blown out light bulbs.
"When I wasachild, my parents stopped buying me watches because my magnetic field kept interfering with the timing mechanism.
"We also constantly had the TV repair man round because I had interfered with the electronics in some way," she said, adding her body could emitanegative or positive charge, depending on the time of the month.
The mother of one child, who is dubbed "the human magnet", said she was often embarrassed by her mysterious power.
"I hadadreadful experience atasupermarket. When I reached the check-out, the till machine started to misbehave.
"The man on the checkout shouted at me and accused me of puttingavoodoo curse on his till."
Allison said the metallic objects could stay on her body for up to 45 minutes and when the pulse was at its strongest, she could even dance without the items falling off.
As she grew up, she realised the magnetic pulses were strongest at the end of each menstrual cycle.
Allison, of Holloway in North London, first noticed the effects of her magnetism when she was in nursery school.
She said: "Metal objects don’t fly towards me but when I put them close to my skin I can feelapull. They tend to stay on for longer if they are nearabone - I don't know why."
"My son has grown up with my magnetism, so he finds it normal. But he used to complain when it stopped his battery-operated toys from working."
Every person has an electromagnetic field flowing through his or her body but most would not notice it because the field is too weak.
Kathy Geminiani, an electrotherapy expert, said it was possible that Allison hasastronger charge in her body.
"Everyone hasacharge, all slightly different. It sounds like Brenda is highly charged."
Source and photo: Daily Mail, UK
Posted by Unknown | at 5:42 AM | 1 comments
Venezuelan politician offers breast implants as ra...
Man says he gave birth to baby girl after losing h...
Meet Panjo, the 23st Bengal tiger who raids the fr...
Toothless robber turns out to be fairly easy to id...
101-year-old lady gets her third tattoo
Woman who fears bananas
Man ate aircraft
Woman sleeps with 20 strangers to get pregnant
Taoist priest accused of raping student
Company makes condom for gay men
'I've had sex with 5,000 men in nine years (but ne...
Indonesian mums who do not breastfeed may face jai...
Armless man Liu Wei plays piano with his toes
A stinging competition as contestants fight it out...
Teenager forced to parade in the nude
Three war vets, one good leg: Amputees climb Kilim...
Black leggingsafatal 'health risk'
93-year-old Chinese Woman Does Splits
Top cop in frock shock
Pea plant sprouts in man's lung
Let's hear it for Luntik: The amazing cat with FOU...
Child prodigy reads and gives medical tips aged three
China plans huge buses that can drive over traffic
Hibernating man baffles doctors
Chinese man woos doctor with blood-dripping knife
Two-legged lamb saved from the chop ခြေထောက...
Woman dubbed 'flamingo lady' after rare neurologic...
Red mist for polygamist Swazi king as wife No 12 '...
"I thought boy was gay", says rapist
Four-Year-Old Sets Indian National Record For Push...
Politician prostitutes wife to pay loans
Dangerous Roadside Stunt Show....